लौ आयो मासु भएको भेज खाना !
मांसाहारी भन्दा साहाकारी को औशत आयु लामो हु्न्छ रे। त्यसैले होला जापानीजहरुको औसत आयु निकै लामो छ। माछा मासुबाट बढि रोगहरु लाग्ने हुदा धेरै मान्छेहरु साहाकारी हुन हौसीएका छन। धेरै बाच्नु राम्रो हो त्यसैले शाहाकारी हुनु झनै राम्रो। ल भन्नुस त मासु भएको भेज खाना भयो भने त्यसलाइ के भन्ने? उत्तर सजिलो छ,नेपालको लोकतन्त्र। साच्चै नेपाली १० बर्ष पढियो,कक्षा १२मा नि नेपाली पढियो,त्यो लोकतन्त्र भन्ने शब्द सुनेको भए मार्दिनु। नेपालमा हुदा गिरिजा देखी मदन भण्डारीको भाषण नि सुनेकै हो,त्यती बेलासम्म यो लोकतन्त्र आबिस्कार भइसेकेको थिएन। जंगलबाट आयो कि शहरबाट आयो,अहिले लोकतन्त्र नभनी भाषणनै सुरु हुदैन। लोक भनेको जनता,लौ जनताकै शासन रैछ,भोट दिन नपाए नि हाम्रै शासन चल्यारैछ ठिकै छ। आखिर भोट दिए नि हाम्रै मान्छे, नदिए नि हाम्रै मान्छे। के को भोट दिन दु:ख गरिराख्नु पर्यो चर्को घाममा लाइनमा बसेर? फेरी आफु त अमेरिका बसियाछ,त्यसै भोट दिन पाइन्न,ह्यइ बसी बसी आफ्नै शासन हेर्न पाइने,गज्जब भएन त ?लोकतन्त्र राम्रो संग नबुझे पनि यसो खबर खाबरबाट अर्थाउने प्रयास गर्दैछु।आज बिहानै हेरेको त नेपालमा राजा सहितको गणतन्त्र रे,भो कि अब !एइ हो कि क्या हो राष्ट्रबादीलाइ समेट्ने भनेको।
एक जना नानी आफ्नो कोठामा भुतले तर्सायो भनेर सधै आमासंगै सुत्ने। यसो गर्दा आमा चाहींलाइ दिक्क लागेछ,त्यस पछि एउटा बासना आउने स्प्रेमा "Ghost Repellent" लेखेर त्यो नानीको कोठामा चारैतिर छरीछन। त्यस पछि त के को आउनु नि भुत, भुत सधैलाइ गायब।नेताहरुले जनतालाइ गणतन्त्र ल्याउने त भनिहाले,अब संबिधानमा गणतन्त्र लेखेर राजा सहितको गणतन्त्र ल्याउन लाएको त होइन ? ल भएन त अब मासु सहितको भेज खाना?
Oh bro testo po ho bhej bhako khana? ma ta khanai bhaneko. but anti-ghost spray isaclassic one.